Qubanaha » SHARIIF XASAN oo 4 sano kadib mar kale lagu ciqaabay qaladkiisa Siyaasadeed,Labo waddo ayaa u furan Shariifka inuu is casilo ama.
SHARIIF XASAN oo 4 sano kadib mar kale lagu ciqaabay qaladkiisa Siyaasadeed,Labo waddo ayaa u furan Shariifka inuu is casilo ama.
Inta uu jiro Isbaheysiga Siyaasadeed ee Hawiye iyo Daarood ee keliya ku mideysan yihiin inaan cid kale oo beel soomaaliyed qaadan Madaxweynaha iyo Ra’iisal wasaaraha aad ayay u adagtay inay meel marto qorshe kasta oo ah in beelaha Digil iyo Mirifle laga wareejiyo jagada afhayeenka Baarlamaanka.
Waa dhici kartaa in Dir ama Beesha Shanaad loo doorto afhayeenka Baarlamaanka balse waa marka la waayo qof Digil iyo Mirifle ah.
Laakiin dadka ka faalooda arrimaha Siyaasadda waxay sheegayan in Shariif Xasan Sheekh Aadan mar kale sameeyay qalad la mid ah kii uu galay 2012 kii markaas oo sidan oo kale fursad weyn uu siiyay Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Waqtigaas Shariif Xasan waxaa uu ku duulayay Cali Khaliif Galeyr oo Daarood ka soo jeeday balse waxaa jabiyay isbaheysiga Hawiye iyo Daarood.
Maanta 2017 Shariif Xasan mar kale ayuu fursad qaali ah oo ku sixi karay qaladkii uu shalay galay iska qasaariyay, isla qaladkii shalay ayuu sameeyay waxay ahayd xataa in beesha Hawiye qof ka soo jeeda tijaabiyo, xataa taas nafteedu waa qamaar siyaasadeed aad ayay u adkaan lahayd.
Ama Waxay ahayd inuu soo dhiso qof degaankiisa ka soo jeeda oo la tartami kara Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari marka waxaa adkaan lahayd in jawaari si fudud guusha ku raacdo.
Fursadii uu dhabarka uga jabin lahaa Jawaari isaga ayaa qasaariyay.
Xildhibaanada u codeeyey Prof Jawaari waxay ka kala socdaan musharixiin Madaxweyne oo uu loolan adag u dhaxeeyo sida taageerayaasha Musharax Hassan Sheikh, Taageerayaasha Musharax Omar Abdirashid, Taageerayaasha Musharax Farmaajo iyo musharixiin Madaxweynayaal kale.. Waxaana xaqiiq ah meesha uu miisaanka saaro Madaxweynaha Koofur Galbeed Sharif Hassan iyo taageerayaashiisa in tartamada kale ku guuleysan karaan.
97 Cod ayuu hadda Isbaheysiga Shariif Xasan haystaan waxayna ku soo afjari karaan haddii aan la kala jabin damaca Xasan Sheekh Maxamud ku doonayo in mar kale loo doorto Madaxweynaha Soomaaliya.
Fursada kale ee Shariif Xasan ku badbaadin kara mustaqbalkiisa Siyaasadeed waxay tahay inuu iska casilo jagada Madaxweynaha koonfurgalbeed una sheego dadkiisa inuu isku daygiisa labada mar ee ku raadinayay inuu Digil iyo Mirifle barta madow ka saaro uu ku fashilmay sidaas darteed qof kale hogaanka koonfur galbeed fursad loo siiyo bal haddii himilooyinka noocaas ah suuragelin karo.